Ampiasaina ny Voambolana “Vaovao Faikany” Handrahonana ny Mpitsikera · Global Voices teny Malagasy
Mampiasa Ny Voambolana "Vaovao Faikany" Ireo Mpitarika Ao Azia Atsimo Atsinanana Mba Hanamarinana ny Fanenjanana Kokoa ny Lalànan'ny Media sy Handrahonana ny Mpitsikera
Voadika ny 11 Avrily 2017 5:37 GMT
Nanambara ny drafi-panjakana hanavao ny Lalànan'ny Fandefasam-baovao tamin'ny Parlemanta ny Minisitry ny Fifandraisana sy ny Fampahalalam-baovao ao Singapaoro mba hialàna amin'ny fitomboan'ny vaovao diso sy ny “vaovao faikany” ato amin'ny aterineto.
Tsy nanome fanazavana antsipirahany momba ny fanitsiana kasaina atao ny minisitra saingy milaza ny vaovao malaza vao haingana ao amin'ny mpanao lalàna fa mety hitarika any amin'ny lalàna hentitra kokoa izany. Tamin'ny taona 2013, nitaky tamin'ireo tranonkalam-baovao lehibe i Singapaoro mba hisoratra anarana amin'ny fanjakana sy handoa vola saran'ny lisansa. Nandrisika ireo manampahefana mba hanaisotra izay votoaty antserasera manimba ny “firindràna ara-tsosialy” ihany koa ny fitakiana fahazoan-dalana (lisansa).
Ny filazan'ny minisitra momba ny tokony hiarovana ny “soatoavin'ny fiarahamonina” amin'ny fiadiana amin'ny vaovao faikany dia nahatonga ireo mpikatroka ao amin'ny Wake Up Singapore niahiahy fa mety ho raisin'ny manampahefana amin'ny ankapobeny izany ary mampiasa azy io ho fanamarinana hanivanana mpanohitra sy ny fomba fijery tsy tiana ao amin'ny firenena. Raha mikasika ireo olana saro-pady kokoa tahaka ny fahapelahana, lasa ny fanontaniana raha tsy handefitra intsony amin'ny votoaty antserasera milaza fifandraisana ara-pitiavana eo amin'ny samy lehilahy ny fanjakana. Eny tokoa, vao haingana ny praiminisitra no niaro ny lalànan'ny Sodomia lany andro ao amin'ny firenena raha nolazaina fa mampiroborobo ny ” soatoavim-piarahamonina”.
Taorian'ny niampangan'ny filoha Amerikana Donald Trump ny vondrona haino aman-jery sasany ho mitatitra vaovao faikany sy nandràrana azy ireo tsy hanatrika valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Trano Fotsy, nampiasa hevitra tahaka izany ihany koa ireo mpitarika Kambodziana mba hanevatevana vondrona haino aman-jery sasany.
Nanoratra momba izany tao amin'ny Facebook ny mpitondratenin'ny Filankevitry ny Minisitra, Siphan Phay:
Ny Praiminisitra Hun Sen, izay efa teo amin'ny fitondrana nandritra ny telopolo taona kosa namerina ny fihetseham-pon'i Trump sy ny mpitondrateniny amin'ny fanafihana ny haino aman-jery:
Miresaka ny zava-nitranga hafa tao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Azia Atsimo Atsinanana, namariparitra ny tatitra avy amin'ny New York Times momba ny Filoha Rodrigo Duterte ho vaovao faikany ihany koa ny Sekreteran'ny Biraom-pifandraisan'ny filoha, Martin Andanar:
Mandritra izany fotoana izany, nametraka volavolan-dalàna ny filohan'ny Antenimiera, Pantaleon Alvarez izay mandidy ny tokony hanamarinan'ny orinasan'ny media sosialy ny mombamomba ny mpiserasera alohan'ny hanoratana azy ireo ao amin'ny tambajotran'izy ireo, amin'izay izy ireo afaka manakana ny mpiserasera mba tsy hamorona kaonty faikany sy hanaparitaka vaovao faikany. Nampahafantatra orinasa media sosialy sasany mety ho voakasiky ny volavolan-dalàna mihitsy aza ny Lalànan'ny Fandrindràna ny Media Sosialy 2017:
Nilaza ireo manampahaizana momba ny media sosialy fa marina ny an'ny Filohan'ny Antenimiera raha milaza ny olan'ny vaovao faikany sy ny halatra anarana ao amin'ny media sosialy saingy nampahatsiahy azy izy ireo fa tsy ilaina sy tsy mila ampiharina ny fepetra. Niaro ny zon'ny mpiserasera sasany hijanona tsy mitonona anarana rehefa maneho ny heviny ihany koa izy ireo.
Nampahafantarin'i Malezia ny Sebenarnya.my, “fitaovana an-tserasera mamela ny vahoaka hizara vaovao tsy voamarina miely ao amin'ny media sosialy, tolotra hafatra fohy sy tranonkala miaraka amin'ny sampan-draharaham-panjakana azo antoka” mba hanampy amin'ny fanamarinana ireo loharanom-baovao antserasera sy hanaisotra vaovao diso. Sebenarnya dia voambolana Bahasa midika hoe “marina”.
Tsy irery i Malezia amin'izany. Nanomboka tamin'ny taona 2012, manitsy ireo “tati-baovao tsy marina amin'ny alalan'ny tranonkalany “Factually”” ny governemantan'i Singapaoro. I Indonezia koa mandritra izany nanambara fa hanangana sampan-draharaham-baovao an-tserasera tsy ho ela mba hiadiana amin'ny vaovao faikany.